ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: ဘယ်ခွေးဝဲစား စကားမှ နားထောင်စရာ မလိုဘူး
ဘယ်ခွေးဝဲစား စကားမှ နားထောင်စရာ မလိုဘူး
ငါတို့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း အပေးအယူ လုပ်ပြီး ဆွေးနွေးရာမှာ
ဘယ်ခွေးဝဲစားစကားမှ နားထောင် စရာ မလိုဘူး
ကြမ်းလှ ချည်လားလို့ မထင်ပါနဲ့ ဒီစကားက ကျွန်တော်ရဲ့ စကားမဟုတ်ပါ။ အခု လက်ရှိ အခြေအနေနဲ့ များစွာ အပ်စပ် ဆီလျော်နေလို့ တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရဲ့ဝံ့ပြတ်သားတဲ့ စကားကို ပြောကြားတဲ့ သူကတော့ ကချင် တုိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ မျိုးချစ် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆမားဒူးဝါ ဆင်ဝါနောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဝါကြီးဟာ စိတ်သဘောထား အလွန် မြင့်မြတ် ရိုးဖြောင့် ပွင့်လင်းသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ပက်ပက်စက်စက် ပြောချလိုက်ခြင်းဟာ အလွန်ခံပြင်း ဒေါသ ထွက်လို့ ပြောချ လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဝါကြီး ဒေါသထွက်ရသော ဖြစ်ရပ်ကို အကျဉ်းချုံး ဖော်ပြလိုပါတယ် ။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ပင်လုံ မြို့ငယ်ကလေးတွင် တိုင်းရင်သား ခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာ နိုင်ငံတော် လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ ၊ ပြည်ထောင်စုကြီး အညီအညွတ် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ဖို့ ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် အတွက် မူကြမ်းကို ပြင်ဆင် နေကြ ပါတယ်။
ဒီနေ့ နံနက် စောစောပိုင်းမှာ မစ္စတာ ဘော့တွမ်လေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တည်းခိုရာ တဲကို လာရောက်ပြီး စာချုပ်မူကြမ်း တစ်စောင်ကို ပေးပါတယ်။ ဒီစာချုပ်မူကြမ်းဟာ အချက်အလက် မပြည့်စုံ သဖြင့် စာချုပ်မူကြမ်း ရေးဆွဲရေး ကော်မတီက ပယ်ချထားတဲ့ စာချုပ်မူကြမ်း ဖြစ်ကြောင်းကို ဗိုလ်ချုပ် မသိပါဘူး ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဒီစာချုပ်မူကြမ်း ရရှိတဲ့အခါ မိမိအား ဦးစွာ မပေးဘဲ မစ္စတာ ဘော့တွမ်လေ ထံမှ တဆင့် ရရှိတာကို များစွာ မကျေမနပ် ဖြစ်သွားပါတယ်။
သို့သော် နံနက် ၁၁ နာရီ အချိန်မှာ ကော်မတီ နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်တဲ့ စာချုပ်မူကြမ်း ၃ စောင်ကို မိုင်းပွန် စော်ဘွားကြီး၊ လင်းခေး ဦးထွန်းမြင့် ၊ ဦးဖေခင်တို့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထံ တင်ပြပြီး ““ မစ္စတာ ဘော့တွမ်လေ ပေးသော စာချုပ်မူကြမ်းမှာ ကော်မတီက ပယ်ထားသော မူကြမ်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယမန်နေ့ညက ၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အထိ အေးနေသဖြင့် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ပြီးသော မူကြမ်းကို အချော မရိုက်နှိပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ”” ရှင်းလင်း ပြောကြားမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျေနပ် သွားခဲ့ပါတယ်။ အမှန်မှာ မစ္စတာ ဘော့တွမ်လေက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနဲ့ တိုင်းရင်းသားများ အကြား အထင်အမြင် လွဲမှားအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗြိတိသျှတို့ဟာ အစည်းအဝေး မပျက်၊ ပျက်အောင် ခြေထိုးမှုများနှင့် သွေးခွဲမှုများကိုလည်း ယခင် နေ့များကထက် ပိုမို ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ““ ဗမာတွေက ခင်ဗျားတို့ကို လိုက်လျောလှချည်လား၊ ဒါလောက် လွယ်တာက အကြောင်း တစ်ခုခုတော့ ရှိရမယ်။ အရမ်းမလုပ်ဘဲ စဉ်းစဉ်းစားစား လုပ်ကြရန် ကောင်းမယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ကို ကြည့်ပါလား ဂျပန်စိတ် မပျောက်သေးဘူး၊ တော်တော်ကြာရင် ခင်ဗျားတို့ ဖက်ဆစ်တွေ လက်အောက် ရောက်သွားမှာပဲ ““ ဟူသော လေသံတွေဟာ တောင်တန်းဒေသ ကိုယ်စားလှယ်များ တည်းခိုတဲ့ နေရာများတွင် ပြန့်လွှင့်လျက် ရှိပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ နယ်ချဲ့တို့ ခြေထိုးသွေးခွဲပုံများကို တောင်တန်း ဒေသ ကိုယ်စားလှယ်များ နားမယောင်စေရန် အတွက် ဖဆပလ အမှုဆောင်များ၊ ရှမ်းပြည် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ်မှ အဖွဲ့ဝင်များဟာ တစ်တဲဝင် တစ်တဲထွက် ပြောဟော စည်းရုံး ကြခဲ့ရ ပါတယ်။
ထိုသို့ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ် ပေါင်းစုံ အစည်းအဝေးကြီး ဖြစ်မြောက်ပြီး ပင်လုံစာချုပ်တွင် ပါဝင်သည့် အချက် အလက်များကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ဒီလို ဆွေးနွေးစဉ်မှာလဲ မစ္စတာ ဘော့တွမ်လေ ရောက်ရှိလာပြန်ကာ ““ နိုင်ငံရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သော စာချုပ် စာတမ်းများ ချုပ်ဆို ရာတွင် အစစ အရာရှိ ဆင်ခြင် တိုင်းထွာပါ။ နောင်ရေး အတွက် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး စဉ်းစားပါ။ စာတစ်ပိုဒ် ၊ စကား တစ်လုံး လိုသွားပါက ချည်ပြီး တုပ်ပြီး ဖြစ်နေတတ်သည်။ မလှုပ်မရှားနိုင် ဖြစ်ပြီး နစ်နာ တတ်သည်ဟု ““ ပြောဆို သွေးထိုး ပေးပြန်တယ်။ ထိုအခါ ကချင်ကိုယ်စားလှယ် ဆမားဒူဝါ ဆင်ဝါနောင်က ““ ငါတို့ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း အပေးအယူ လုပ်ပြီး ဆွေးနွေးရာမှာ ဘယ်ခွေးဝဲစား စကားမှ နားထောင်နေစရာ မလိုဘူး ”” စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး စိတ်ဓာတ် ဖြင့် ပြောပစ် လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဆိုလိုတာကတော့ ဒီနေ့ အချိန်အခါမှာ အင်အားကြီး နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံနှင့် အပေါင်းအပါ နိုင်ငံတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အင်းအားကြီးမားမှု၊ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာမှုတို့ဖြင့် ရောင့်ရဲ မနေနိုင်ဘဲ အကျိုးအမြတ်ရှိမည်ဟု မျှော်မှန်းထားတဲ့ နိုင်ငံငယ်တွေ အပေါ်ကို ဗိုလ်ကျစိုးမိုး လိုခြင်း၊ ခေတ်သစ် ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့လိုခြင်းများကို အစဉ်တစ်စိုက် ပြုလုပ်လာသည်ကို တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေ အားလုံးပါဝင် ရေးဆွဲ ပြီးစီး သွားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရဲ့ အခြေခံမူနဲ့ အသေးစိတ် အခြေခံရမယ့် မူတွေကိုလည်း ဟိုလူမပါလို့ တရားမ၀င်ဘူး ၊ ဒီလူမပါလို့ တရားမ၀င်ဘူး ၊ ဟိုအဖွဲ့ ၊ ဒီအဖွဲ့ မပါလို့ တရားဝင်ဘူးလို့ သွေးထိုး မြှောက်ပင့် အမြဲမပြတ် ပြောကြား နေတာ ကြားသိနေရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘာတွေ ပြောပြော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကြီးကို စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး စိတ်ဓာတ်နဲ့ ရေးဆွဲ လာတာဟာ အခုဆိုရင် မူကြမ်း ရေးဆွဲနေတဲ့ အဆင့်ထိ ရောက်ရှိနေပါပြီ ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လဲ ဆမားဒူဝါကြီးလိုပဲ ““ ငါတို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်း အပေးအယူလုပ်ပြီး နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရာမှာ ဘယ်ခွေးဝဲစား စကားမှ နားထောင် နေစရာ မလိုဘူး “““ လို့ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
Myint Yee said...
Yethun the stupid fool, do you even have brain? Oh yeah, I can see you don't have one.
Ha, you are talking about holding the constitution meeting and discussing with other tribes. Do you know how long that constitution has been going on? It's even longer than your age, you know that? What kind of stupid people need to take 20-30 years to draft the constitution? Only power-clinging and brainless people need that long.
And you are raging about this one-sided constitution. The assembly itself was handpicked by your fools, and the structure is undemocratic. Whatever people's elected gruops said, you rejected them. That's why, they left the meeting. And the rest are just listening bodies. You do whatever you want in there. AND YET, YOU ARE TALKING ABOUT GIVING US FREEDOM, JUSTICE, AND RIGHTS. HELL, NOBODY BELIEVE YOU!
If you want the country to really flourish, and see Burmese people to have quality of life, why did you bar political parties from entering into election? If you don't allow Aung San Suu Kyi, then what about Min Ko Naing, Ko Ko Gyi, and the rest?
This blog doesn't even have enough space for me to write down everything I have. But, just to show you how stupid you are, I just wroteabit of what is right or wrong.
ရန်ကုန်ဘူတာကြီး သန့်စင်ခန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်စုကြည့်၊ နိုင်ငံရေးသမားမျာ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်စုကြည်၊ နိုင်ငံရေးသမားများ...